TogaHerer: “CIIDAMADA C.I.D-DU HAWSHOODA WAY WATEEN, WAXAANAY QABTEEN DAD DOOR AH” WASIIRKA HAWLAHA GUUD
“CIIDAMADA C.I.D-DU HAWSHOODA WAY WATEEN, WAXAANAY QABTEEN DAD DOOR AH” WASIIRKA HAWLAHA GUUD
“Ciidamada C.I.D-du Hawshooda way wateen, waxaanay qabteen dad door ah”
Wasiirka Wasaaradda Hawlaha Guud ee Somaliland Siciid Sulub Maxamed, ayaa ka warbixiyay socdaallo uu ku tagay Gobolka Sool. Waxaanu ka xog-waramay xaaladda Magaaladaas iyo guud ahaan gobolka Sool, toddobaad ka dib markii halkaa Qarax lagu dilay Taliye ka tirsanaa Ciidamada Qaranka.
Wasiirka Hawlaha Guud Siciid Sulub Maxamed oo isagoo ku sugan magaalada Burco, xalay khadka Telefoonka xog-waran kooban ku siiyay Wargeyska Ogaal, waxa uu sheegay in Wasaaraddiisu ay wax ka qabatay Waddada u dhexaysa degmada Yagoori iyo Adhi-cadeeye oo ka tirsan gobolka Sool. Waxaanu ka war-bixiyay wax-ka-qabashada jidkaas oo uu xusay inay Daadadku dhowaan waxyeeleeyeen ay muddooyinkan dambe farsamada-yaqaanada Wasaaraddu ku mashuulsanaayeen. “Waxaanu geynay dadkii samayn lahaa, si hawsheeda loo bilaabo,” ayuu yidhi Wasiirku. Wuxuuna intaa ku daray, inay kormeero dhinaca dayactirka wadooyinka ah ku soo sameeyeen jidka xidhiidhiya Laascaanood iyo Garoowe. “Hawlgalkayagu wuxuu ahaa mid shaqo oo Wasaaradda Hawlaha Guud ah iyo hawsha wadada ah, kollayna markii aanu Laascaanood ku soo noqonay (masuuliyiin ahaan), Ciidamada madaxdooda iyo baayac-mushtarigaba waanu is aragnay, way noo warameen, annaguna wixii talo iyo waano aanu sii karaynay waanu siinay….Socdaalka waxa igu weheliya Injineero ka tirsan hay’adda Waddooyinka Somaliland,” ayuu yidhi Siciid Sulub.